‘स्लो पोइजन’ हो बाथरोग
केही वर्षअगाडि मकवानपुरकी रिताकुमारी तामाङलाई जाडो लाग्नेबित्तिकै हातखुट्टा सुन्निेने, पोल्ने र दुख्ने समस्याले सतायो। सुरुमा चिसोको कारणबाट होे भनेर वास्ता नगरेकी रितालाई समस्या बढ्दै गयो। हातका औंलाहरु बांगिनथाले। अस्पताल पुग्दा बल्ल थाहा भयो, उनलाई बाथरोग भइसकेको रहेछ। अहिले उनको हातका औंलाले अहिले राम्ररी काम गर्दैनन्। नियमित औषधि खानुपर्छ।
रामेछापका ४५ वर्षिय मानबहादुरलाई गत वर्षको जाडोमा शरीरका जोर्नी अत्यधिक दुख्ने तथा करकर खाने, पोल्ने, सुन्निने समस्या देखियो। तर, उनी उपचारका लागि अस्पताल गएनन्। यो वर्षको जाडो शुरु भएलगत्तै जोर्नीहरु अत्यधिक दुख्न थालेपछि उनी काठमाडौंको टिचिड अस्पतामा जँचाउन गए। बल्ल उनलाई पनि बाथ भइसकेको थाहा भयो। उनी अहिले बाथको औषधि खाइरहेका छन्। मानबहादुर भन्छन्, ‘३ वर्ष अघिदेखि नै जाडोको समयमा दुख्थ्यो तर चिसोले भनेर वास्ता गरिएन। पछिल्लो समय धेरै नै दुखेपछि उपचारको लागि आएको हुँ।’
विभिन्न अस्पतालको तथ्यांक हेर्ने हो भने अन्य समयमा भन्दा जाडोको समयमा बाथरोगका बिरामीहरु बढी आउने गरेका छन्। चिकित्सकहरुका अनुसार बाथ रोग विभिन्न प्रकारको हुने भए पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी गठिया बाथ देखिने गरेको छ।
गठिया बाथले मुख्यतया हात तथा खुट्टाका साना जोर्नीलाई असर गर्छ। यसले २० देखि ५० वर्षका महिलालाई ज्यादा असर गर्ने देखिएको छ। यद्यपि, बालकदेखि वृद्ध, महिला तथा पुरुष सबैलाई अप्ठेरो पार्ने गरेको छ
नेपालमा ३० लाखभन्दा बढी मानिस बाथ रोगबाट पीडित भएको सम्बद्ध चिकित्सकहरुको अनुमान छ। राष्ट्रिय बाथरोग सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक रोशन कक्षपतिका अनुसार बाथरोग सयभन्दा बढी प्रकारका छन्। यीमध्ये युरिक एसिड, ओस्टियो अर्थाइटिस र गठिया बाथबाट धेरै मानिस पीडित छन्।
बिरामीमा देखिने लक्षणका आधारमा बाथरोगको प्रकार छुट्याउन सकिने निर्देशक कक्षपति बताउँछन्।
जाडो मौसममा जोर्नी दुख्ने समस्या र बाथ रोग पनि धेरैलाई देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन्। बाथरोग विषेशज्ञ विनित वैद्यका अनुसार शरीरभित्रको तापक्रम र बाहिरको तापक्रम नमिल्दा जोर्नीसम्बन्धी समस्या देखा पर्छन्। जाडो महिनामा बाथ रोगका बिरामी पनि धेरै देखिन्छन्।
वैद्य भन्छन्, ‘रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएर शरीरका अंगलाई कमजोर बनाउँदा बाथरोग लाग्छ। बाथरोग जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ। विशेषगरी, महिला, बूढाबूढी र मोटोपन भएका व्यक्ति बाथरोगबाट पीडित भएको पाइन्छ।’
नेपालमा करिब ३० लाख बाथरोगी रहेको डा. वैद्य बताउँछन्। तीमध्ये करिब १ लाखको हाराहारीमा मात्रै उपचारको पहुँचमा छन्। बाँकी २९ लाख बाथरोगीले उपचार पाएका छैनन्। ‘बाथरोगको उपचारमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको तथा आवश्यक औषधि उत्पादन भएकाले ८० प्रतिशत बाथरोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ,’ डा. वैद्यले भने।
बीबीसीका अनुसार बेलायतमा मात्रै एक करोड बाथरोगी छन्। अप्राकृतिक जीवनशैली, श्रम गर्ने संस्कारको कमी, भद्दा भोजन र वंशाणुगत कारण नेपालमा बाथरोगीको संख्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
जोर्नी दुख्ने समस्यालाई बाथरोग भन्ने गरिए पनि अन्य लक्षणको रुपमा पनि यो रोग देखा पर्छ। कहिलेकाहीँ अन्य रोगसँग मिसिएर पनि देखा पर्न सक्छ। बाथरोग विषेशज्ञ विनित वैद्यका अनुसार बाथरोग सामान्यतया रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली (इम्युन सिस्टम) का कारण हुन्छ।
यसले धेरैजसो शरीरको जोर्नीका साथै छाला, आँखा, दिमाग, मुटु, फोक्सो, मिर्गौलालगायतमा असर पुर्याउँछ। ‘अटो इम्युन’ रोग धेरै प्रकारका हुन्छन्। रोगअनुसार लक्षण फरक¬फरक हुन्छन्।
हात–खुट्टाका जोर्नीहरु सुन्निने र दुख्ने
बिहान उठ्ने बेलामा जोर्नीहरु करकर गर्ने, केही बेरपछि जोर्नी खुल्दै जाने
चिसो पानी चलाउँदा या जाडो मौसममा हातका औंलाहरु नीलो र सेतो हुने
बिस्तारै जोर्नी र औंलाहरु बाङ्गिएको महसुस हुने
अनुहार, हात र शरीरका अन्य मांसपेशीहरु कस्सिने, छाला नखुम्चने र औंलाका टुप्पोमा घाउ हुने
मुख एकदम सुख्खा हुने र खाना निल्दा पानी पिउनुपर्ने मुख सुख्खा भएर गिजामा घाउ हुने
आँखा सुख्खा हुने, रातो हुने र आँखामा बालुवा पसे जस्तो बिझाउने
थुक निकाल्ने ग्रन्थि सुन्निने, गाला सुन्निएको जस्तो देखिने
हातगोडाका एउटामात्र औंला सुन्निने
औंलाहरु निलो वा कालो भएर झर्ने
बाथरोगीले चिसो, अमिलो, गालेको पुरानो अचारबाहेक अन्य खाना बार्नु पर्दैन। तर, युरिक एसिड बाथमा रातो मासु, मादक पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, भटमास, तामा, पालुंगो र काउली, जंकफुड आदि सेवन गर्नु हुँदैन। यस्ता खाद्य वस्तुले युरिक एसिडलाई बढाइदिन्छ।
बाथ रोग प्रायः जाडो यामबाट सुरु हुन्छ। यो रोग उच्च रक्तचाप र मधुमेह भएको मान्छेमा धेरै देखिन्छ। बाथरोगको उपचार समयमै नगरे यो स्लो पोइजन सरह हुने चिकित्सक बताउँछन्।
बेलुकी मनतातो पानीमा नुन राखेर पाँचदेखि १० मिनेट हातखुट्टाको औंला सेक्ने
चिसो मौसममा तातो खानेकुरा खाने र न्यानो कपडा लगाउने
धुम्रपान तथा मद्यपान नगर्ने
सुकेको गेडागुडी, गोलभेँडा जस्ता खानेकुरा नखाने
शरीरमा निलडाम देखिएमा, मुखमा घाउ आएमा वा छालामा डाबरहरु देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकलाई दखाउने।
बाथरोगको उपचारमा फिजियोथेरापी, हाइड्रोथेरापी र मसाज जस्ता पद्धति अपनाइएको पाइन्छ। डा. वैद्य भन्छन्, ‘बाथरोगको सुरुवाती चरणमा उपचार गराउन सकेमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। बिरामीलाई लागेको बाथरोगको प्रकार हेरेर यसको उपचार गरिन्छ।
फिजियोथेरापीबाट पनि बाथरोगको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर यो सुरुवाती चरणमै गर्नुपर्छ। यसले जोर्नीवरपरको लिगामेन्ट र मांसपेसीलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। जसले गर्दा जोर्नीको दुखाइ कम हुँदै जान्छ।
तर, नेपालमा बाथ रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ र उपचार केन्द्रको अभाव रहेको डा. वैद्य बताउँछन्। पहिले बाथरोगका कारण मान्छे अपांग हुने भए पनि अहिले सुरुवाती अवस्थादेखि नै उपचार हुने भएको त्यस्तो खतरा कम हुँदै गएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।